waxbarashada | Mustaqbal Radio
Home - waxbarashada
W.Waxbarashada oo sheegtay in ardey ka badan 27,000 u fariisteen Imtixaanka Dugsiga sare
Mas’uuliyiin katirsan Dowladda Federaalka ayaa tagay Iskuulada 15-May iyo 21-ka Octoberoo ku kala yaalla Degmooyinka Warta Nabadda iyo Waaberi. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkaan uu yahay sanadkii ugu badneed oo ay imtixaanka u fadhiistaan Ardayda. Waxa uu ku tilmaamay in ay tahay in Bulshada ay lasoo qabsaneyso gelista Imtixaanka Wasaaradda ay qaadeyso, kuna ...
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya oo maanta bilaabeysa Qaadista Imtixaan Sanadeedka 2017/18.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in maanta oo ay tahay 19-ka May in ay qaadayaan Imtixaan Sanadeedka 2017/2018-ka. Ardayda galeysa Imtixaanka waxa uu tiradooda ku sheegay in ay gaarayaan 27,600 Arday, kuwaas oo ku kala galaya Magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb. In kabadan 120-Xarumood ayuu tibaaxay in Wasaaradda Waxbarashada ay u Wasiir Cabdiraxmaan ayaa Arbacadii ...
Wasiirka Waxbarashada “Imtixaanka Meel katirsan Muqdisho ayaa lagu daabacay, uuna yaalaa”.
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in Wasaaradiisa ay u diyaar garowday Qaadista Imtixaanka Shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2017/2018-ka. Tirada Ardayda sanadkaan u fadhiisaneysa Imtixiaanka waxa uu ku sheegay in ay gaarayaan 27,600 oo Arday (Todobo iyo Labaatan kun iyo lex boqol oo arday), iyagoona ku kala galaya Xarumaha Maamul Goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Hir-Shabeelle, Koofur Galbeed ...
Wasiirka Waxbarashada XFS oo la wareegay Xarun Wasaaradda ay ku laheyd Degmada Hodan.
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta dib ula wareegay Xarun Wasaaraddu ay ku laheyd Degmada Hodan, oo ay degenaayeen Dad Shacab ah. Gudoomiyaha Degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobo ayaa Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxman Daahir Cismaan ku wareejiyay Xarunta. Waxa uu sheegay in goobtaasi ay kamid aheyd Xarumo dadka Shacabka ay ka helaan Adeegyo Waxbarasho, sidaa awgeedna waxa ...
Muqdisho: Ardey burburisay Dugsiyadii ay wax ka baranayeen, Dhegeysi
Degmada Dharkeynley ee Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax ay dhigeen qaar ka mid ah ardeyda wax ka barata dugsiyada sare ee Degmada. Ardeyda ayaa ka cabanayay Imtixaan ay Qishkiisa heleen oo la beddelay,waxaana ay bur burin kula dhaqaaqeen iskuullada ay wax ka baranayeen oo gaaraya ilaa saddex Iskuul. Mid ka mid ah Macallimiinta Ardeydaas oo la hadlay Idaacadda ...
Sidee hal-abuurku Soomaaliyeed u muujiyaa dareenkiisa?
Hal abuurka faneed iyo keydka suugaaneed waxa uu astaan u yahay jiritaanka dhaqanka ummadeed, waana halka marka loo baahdo in la daraaseeyo dhaqanka iyo heerka ilbaxnimada shucuubta laga billaabo, si loo ogaado awoodda faneed iyo kartida suugaaneed ee ay ummadi leedahay. Illaalinta iyo dhowridda dhaqanka iyo suugaanta ummaduhu waxa ay kamid tahay shaqada dowladuhu u qabtaan shucuubtooda. Suugaantu waxa ay ...
Fardowsa Jaamac: “Muqdisha waxa loo soo wadaa Mashruuca Saboolnimada Magaalooyinka!” (Urban poverty )
Mustaqbal Radio: Fardowsa Jaamac Yuusuf, Agaasintada Xarunta dhaqanka, Cilmi-baarista iyo Aqriska ee Aw Jaamac Cumar, ayaa kamid ahaa dadkii ka qaybgalay Dabshidka Bandhigga buuga ee Muqdisho, Fardowsa oo kamid ahayd koox qoraa, dhaqan yahan iyo dad ku taqasusay arrimaha Bulshada oo ka qaybgalay munaasabad Casho iyo soo dhoweyn ah ayaa uga warrantay Mustaqbal Radio sida ay xarunta Aw Jaamac Cumar iyo ...
ku saabsan Xaasaska iyo Guur-doonka, Hibo iyo Sh. Axmed Johari
Mustaqbal Radio: Dhowaan Magaalada Muqdisho waxa aan kula kulanay Bare Hibo Cumar Guulle iyo lammaankeeda Sheekh Axmed Bilaal (Sheekh Johari), Kulan Casho iyo soo dhoweyn ah oo Mustaqbal Radio u sameeyey qaar kamid ah qoraaga iyo dadka fanka ee buugtooda iyo waaya-aragnimadooda ku soo bandhigay Dabshidka Bandhigga Buugta ee Muqdisho oo ahaa sanadkii 2aad, ayaan weydiinay bal in ay ka ...
Maxamed Diini: “Sanadkan 2aad, Carwada Buuggaagta Waxa aan xoogga saareynaa dood-buugeedka”
Muqdisho: Mustaqbal Radio: Todobaadka soosocda waxa lagu wadaa in Muqdishow ay ka dhacdo Carwada bandhigga Buuggaagta ee Muqdisho. Agaasimaha ururka New Horizon oo qabanqaabineysa Carwada Bandhigga Buugaata Muqdisho Maxamed Sheekh Cali Diini ayaa u sheegay Mustaqbal Radio in sanadkan waxa ku cusub Carwada ay kamid yihiin: Buuggaagta sanadkan 2aad la soo bandhigayo oo ka duwan kuwii sanadkii hore iyo doodaha ...
Shaqo ka Bannaan Mustaqbal Radio Fm 89.7
Muqdisho: Mustaqbal Radio: Shaqada baahinta ee Raadiyaha iyo Baraha bulshada ee Mustaqbal radio waxa ka bannaan 2 shaqo, sidaas awgeed shaqa-doonka daneynaya ee leh xirfaddan ee doonaya in ay soo dalbadaan, waxa ay xagga hoose ka arki karaan lifaaqa (Link) qeexaya shaqada bannaan Shaqo ka Bannaan Mustaqbal Radio Fm 89.7 Shaqada 1aad Goobta: Muqdisho Heerka: Waqtiga oo dhan Tebiye (Reporter) Shuruudaha ...
Warbixin cusub: Hal Bilyan oo Tan oo cunto ah ayaa la daadiyaa adduunka oo dhan sanad walba, iyada oo ay dad gaajoonayaan!!
Muqdisho: Mustaqbal radio: Hal Bilyan oo tan oo cunto ah ayaa la daadiyaa ama la qubaa adduunka oo dhan sanad walba, iyada oo ay gaajoonayaan tiro ku dhow halkaas Bilyan oo dad ah. Dowlado badan oo Carbeed iyo kuwo kamid ah waddamada soo koraya ayaa arrinta cunto daadintu ka taagan tahay, iyada oo aan laga faaiideysan ayna ...